माउण्टेन इनर्जीको आईपीओमा आवेदन दिने बिहीवार अन्तिम दिन
असोज २९, काठमाडौं । माउण्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेडको आईपीओमा आवेदन दिने असोज २९ गते बिहीवार अन्तिम दिन रहेको छ ।
कम्पनीले आयोजना प्रभावित नुवाकोट र म्याग्दी जिल्लाका स्थानियका लागि ३१ गतेदेखि रू. १९ करोड ६८ लाख २ हजार ७०० बराबरको १९ लाख ६८ हजार २७ कित्ता आईपीओ विक्री खुला गरेको हो ।
कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीयको लागि आईपीओ विक्री खुला गरेको हो भने दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणका लागि पनि सोहि रकम बराबरको आईपीओ विक्री गर्नेछ ।
स्थनिय र सर्वसाधारणका लागि गरि कुल रू. ३९ करोड ३६ लाख ५ हजार ४०० बराबरको ३९ लाख ३६ हजार ५४ कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट कम्पनीले असार २५ गतेनै अनुमति पाएको हो ।
उक्त आईपीओ खरीदका लागि न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम २० हजार कित्तासम्म माग गर्न सकिने व्यवस्था छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानियका लागि छुट्याएको कुल कित्तामध्य नुवाकोट र म्याग्दी जिल्लाको अति प्रभावितको लागि ६० प्रतिशत र प्रभावितका लागि ४० प्रतिशत शेयर छ्ट्याएको छ ।
यो आइपीओ विक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड र सीबीआईएल क्यापिटल लिमिटेड रहेका छन् । कम्पनीको आईपीओलाई केयर रेटिङ्ग नेपालले वित्तीय अवस्था औषतभन्दा कमजोर रहेको संकेत गर्ने केयर एनपी ग्रेड ४ प्रदान गरेको छ ।
यस कम्पनीले नुवाकोट जिल्लामा ५ मेगावाट क्षमताको तादीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गरि व्यवसायिक उत्पादन सुरु गरि सकेको छ भने म्याग्दी जिल्लामा ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्ट्रीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
तादीखोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत रू. १८ करोड ४९ लाख १६ हजार रहेको छ भने मिस्ट्रीखोला जलविद्युत् आयोजनाको कुल अनुमानित लागत प्रति मेगावाट रू. १३ करोड ४३ लाख ४८ हजार रहेको छ ।
उक्त कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थको आधारमा धितोपत्र दोस्रो बजारमा मूल्य रेञ्ज तोकिनेछ । कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ २०७६ चैत मसान्तसम्मको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार रू. ११८ दशमलव ३२ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्ममा कम्पनीले प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १२३ दशमलव ४० कायम गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
उक्त कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ सालमा रू. ४६ करोड ४ लाख ८९ हजार खुद नाफा गरेको छ । यो अवधिमा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. ११ दशमलव ५५ रहेको छ ।